Howlgalka Shirkadaha: In la abuuro adduun nadiif ah
Beerta deegaanka la kontoroolo, si joogto ah u siiso milkiilayaasha adeegyo ka badan filashooyinka.
Si loo siiyo macaamiisha xalalka ugu fiican ee nidaamka deegaanka la kontoroolo.
Si joogto ah loogu abuuro qiime macaamiisha oo loo noqdo isuduwaha nidaamka bay'ada la kontoroolo oo leh awoodda gaarsiinta iyo teknolojiyadda ugu horreysa ee Shiinaha. midda ugu awoodda badan uguna hoggaamineysa is -dhexgalka nidaamka deegaanka ee Shiinaha.
Daacad iyo aamin
1. Shirkaddu waa inay ula macaamishaa macaamiisha si daacad ah. U adeegida macaamiisheena waa qiimaha kaliya ee jiritaankeena. Si aan ugu adeegno macaamiisheena ruuxa "Marna ha dhihin milkiilayaasha".
2. Xubnaha kooxdu waa inay si daacadnimo iyo daacadnimo ku jirto ula dhaqmaan. Daacadnimadu waxay keentaa guul, daacadnimaduna waxay keentaa fudayd. Macnaha daacadda waxa loo qaybin karaa laba qaybood, oo lagu tilmaamayo “runta” qaybta hore, iyo “daacadnimada, runta iyo daacadnimada” qaybta labaad.
Hadal cad ka dib tixgelinta
Samee xiriir macmiil oo caafimaad qaba oo iswaafajiya.
Dhis xiriir fudud oo saafi ah oo dhexmara dadka. Ogolow kala duwanaanshaha iyo ixtiraamka shakhsiyadda.
Ma jiraan cabashooyin iyo marmarsiiyo.
Waxaan hore u soconnaa oo kaliya kuwa weeraryahannada ah.
Dhammaan xubnaha kooxda ayaa mas'uul ka noqon doona natiijooyinka iyagoo leh "go'an", si "looga saaro" natiijooyinka.
Mas'uuliyadda ugu weyn ee shirkad waa guusha ganacsiga. Waa inaan la shaqeynaa fikirka caqliga leh, go'aan qaadashada sayniska xogta ayaana go'aamin doonta.
Barashada joogtada ahi waxay samaysaa horumar joogto ah.
Hal koox oo leh hal nolol hal shay
Si aad ugu noqoto xiriiriyaha silsiladda sahayda ee Fortune 500
Isku day inaad shaqo fiican ka qabato nadaafadda oo qof kasta oo ku hawlan ka dhig mid guulaysta
Hayso kalgacal iyo iimaan leh riyooyin; Ku dhiiranow inaad ka fikirto oo aad qaaddo tallaabooyin leh isla -xisaabtan.
Daaqadda Qolka nadiifka ah, Habka Biyaha Qaboojiyay, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Qolka Nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub,